မကျြခုံးကို သဘာဝဆနျဆနျ လှပစမေယျ့ လှယျကူမွနျဆနျတဲ့ နညျးလမျး (၁၀) ခု
HomeKnowledgeမကျြခုံးကို သဘာဝဆနျဆနျ လှပစမေယျ့ လှယျကူမွနျဆနျတဲ့ နညျးလမျး (၁၀) ခု
သဘာဝဆနျတဲ့ မကျြခုံးထူထူ လှလှလေးတှကေ မကျြနှာရဲ့ အရေးအကွီးဆုံး အစိတျအပိုငျးတှေ ထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။ မကျြခုံးလေးလှဖို့ ဆိုရငျ မိတျကပျ salon ကို အပွေးအလှား သှားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သဘာဝအတိုငျး လှနမေယျ့ မကျြခုံးလေးကို အိမျမှာတငျ ပွငျဆငျလို့ ရပါတယျ။
ကွကျဆူဆီ၊ အုနျးဆီ၊ ထောပတျသီးဆီတှကေို အခြိုးကကြ ရောမှပွေီးတော့ မကျြခုံးပျေါ လိမျးပေးပါ။ အဲဒီအခါ မကျြခုံးက ထူလာပွီး ရှညျလာရုံတငျ မကပါဘူး။ မကျြတောငျပါ ရှညျလာမှာပါ။
2. ဗီတာမငျဓာတျ ပါဝငျသော ဂယျြလျမြား
ရှားစောငျးလကျပတျဂယျြလျ စားပှဲတငျဇှနျး၊ ကွကျဆူဆီ စားပှဲတငျဇှနျး2ဇှနျးနဲ့ ဗီတာမငျ E ဆေးလုံး2လုံးကို ရောမှပွေီး အိပျရာ မဝငျခငျမှာ မကျြခုံးပျေါ လိမျးပေးပါ။ အဲဒီအခါ မကျြခုံးက ထူပွီး အရောငျလညျး စိုနေ မှာပါ။
ကွကျသှနျနီ အသေးတဈလုံးကို အရညျထှကျအောငျ ကွိတျပါ။ ထှကျလာတဲ့ အရညျကို မကျြခုံးပျေါ လိမျးပေးပွီး5မိနဈ ကွာအောငျ နှိပျနယျပေးပါ။ ပွီးတော့ ပုံမှနျသုံးနကြေ မကျြနှာသဈဆေးနဲ့ မကျြနှာသဈလို့ ရပါတယျ။ ကွကျသှနျနီကို အကှငျးလိုကျ လှီးပွီး မကျြခုံး လိမျးပေးရငျလညျး ရပါတယျ။ ကွကျသှနျနီက မကျြခုံးအရှညျ မွနျစေ မှာပါ။
နှားနို့မှာ ပရိုတိနျး၊ ဗီတာမငျ B၊ လကျတဈအကျဆဈနဲ့ ကယျလျဆီယမျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ နှားနို့က ကျောဘဂငျြထုတျလုပျမှုကို လှုံ့ဆျောပေး ပါတယျ။ ပိတျစ ပါးပါးလေးကို နှားနို့ထဲနှဈပွီး အဲဒီ ပိတျစပါးလေးကို မကျြခုံးပျေါတငျထားပေးပါ။ နှားနို့ခွောကျသှားရငျ မကျြနှာသဈလို့ ရပါပွီ။
သံပရိုသီးမှာ ဗီတာမငျတှေ အမြားကွီး ပါဝငျတာကွောငျ့ မကျြခုံးအရှညျမွနျစပေါတယျ။သံပရိုသီးတှကေို အကှငျးလေးတှဖွေဈအောငျ လှီးပွီး မကျြခုံးပျေါမှာ မိနဈ 20 ကွာအောငျ တငျထားပေးပါ။ အုနျးဆီထဲကို သံပရိုသီးအကှငျးလေးတှေ တညျ့ပွီး ကပျပေးရငျလညျး ရပါတယျ။ အိပျရာ မဝငျခငျ နတေို့ငျးပွုလုပျပေးသှားရငျ 15 ရကျ ကွာတဲ့ အခါ သဘာဝဆနျဆနျ မကျြခုံးကို ရမှာပါ။
လကျဖကျဆီနဲ့ လာဗငျဒါဆီက အသားအရအေတှကျ သာမက မကျြခုံးအတှကျလညျး အသုံးဝငျ ပါတယျ။ လကျဖကျဆီ သို့မဟုတျ လာဗငျဒါဆီကို အုနျးဆီ၊ သံလှငျဆီ၊ ကွကျဆူဆီတို့နဲ့ ရောလိမျးလို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဓာတျမတညျ့သူတှေ အတှကျ တခွားအရပွေားပျေါ စမျးသပျပွီးမှ မကျြခုံးပျေါ လိမျးသငျ့ပါတယျ။
ကွကျဥအနှဈမှာ ဗီတာမငျနဲ့ ပရိုတိနျးဓာတျတှေ အမြားအပွား ပါဝငျတာကွောငျ့ မကျြခုံးကို ရှညျပွီး ထူစမှောပါ။ ကွကျဥအနှဈကို မကျြခုံးပျေါလိမျးပေးပွီး မိနဈ 20 ကွာ ထားပေးရုံ ပါပဲ။
Vaseline ကို မကျြခုံး ရဓောတျပွညျ့ဖို့၊ မကျြခုံးနူးညံ့ဖို့ အတှကျ သုံးကွပါတယျ။ Vaseline ကို မကျြခုံးပျေါ လိမျးပေးရ မှာပါ။ Vaseline ကို ကွကျဆူဆီ၊ သံလှငျဆီ၊ ရှားစောငျးလကျပတျဂယျြလျ၊ ရနံ့ဆီ၊ နှားနို့တို့နဲ့ ရောပွီး လိမျးလို့လညျး ရပါတယျ။
9. မကျြခုံးကို နှိပျနယျပေးခွငျး
Mascara brush ကို သုံးပွီးတော့ မကျြခုံးကို နှိပျနယျပေးလို့ ရပါတယျ။ မကျြခုံးရဲ့ အလယျကနေ စပွီးတော့ စကျဝိုငျးပုံစံ နှိပျနယျပေးရငျ သှေးလညျပတျမှု ကောငျးစရေုံသာ မက ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ မကျြလုံးညောငျးခွငျး တို့ကို သကျသာစမှောပါ။
10. အာဟာရ ဖွဈစသေော အစားအစာမြားကို စားခွငျး
မကျြခုံးလှလှလေး ရဖို့ဆိုရငျ နစေ့ဉျ အစားအစာထဲမှာ မွပေဲ၊ အသား၊ ကွကျဥ၊ ဘဲဥ၊ ဆျောလမှနျငါး၊ အသီးအနှံ၊ အသီးအရှကျ၊ ကွကျသှနျနီတို့ကို စားပေးသငျ့ ပါတယျ။
မျက်ခုံးကို သဘာဝဆန်ဆန် လှပစေမယ့် လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ နည်းလမ်း (၁၀) ခု
သဘာဝဆန်တဲ့ မျက်ခုံးထူထူ လှလှလေးတွေက မျက်နှာရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေ ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ မျက်ခုံးလေးလှဖို့ ဆိုရင် မိတ်ကပ် salon ကို အပြေးအလွှား သွားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သဘာဝအတိုင်း လှနေမယ့် မျက်ခုံးလေးကို အိမ်မှာတင် ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။
ကြက်ဆူဆီ၊ အုန်းဆီ၊ ထောပတ်သီးဆီတွေကို အချိုးကျကျ ရောမွှေပြီးတော့ မျက်ခုံးပေါ် လိမ်းပေးပါ။ အဲဒီအခါ မျက်ခုံးက ထူလာပြီး ရှည်လာရုံတင် မကပါဘူး။ မျက်တောင်ပါ ရှည်လာမှာပါ။
2. ဗီတာမင်ဓာတ် ပါဝင်သော ဂျယ်လ်များ
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ် စားပွဲတင်ဇွန်း၊ ကြက်ဆူဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း2ဇွန်းနဲ့ ဗီတာမင် E ဆေးလုံး2လုံးကို ရောမွှေပြီး အိပ်ရာ မဝင်ခင်မှာ မျက်ခုံးပေါ် လိမ်းပေးပါ။ အဲဒီအခါ မျက်ခုံးက ထူပြီး အရောင်လည်း စိုနေ မှာပါ။
ကြက်သွန်နီ အသေးတစ်လုံးကို အရည်ထွက်အောင် ကြိတ်ပါ။ ထွက်လာတဲ့ အရည်ကို မျက်ခုံးပေါ် လိမ်းပေးပြီး5မိနစ် ကြာအောင် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ ပုံမှန်သုံးနေကျ မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လို့ရပါတယ်။ ကြက်သွန်နီကို အကွင်းလိုက် လှီးပြီး မျက်ခုံး လိမ်းပေးရင်လည်း ရပါတယ်။ ကြက်သွန်နီက မျက်ခုံးအရှည် မြန်စေ မှာပါ။
နွားနို့မှာ ပရိုတိန်း၊ ဗီတာမင် B၊ လက်တစ်အက်ဆစ်နဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နွားနို့က ကော်ဘဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေး ပါတယ်။ ပိတ်စ ပါးပါးလေးကို နွားနို့ထဲနှစ်ပြီး အဲဒီ ပိတ်စပါးလေးကို မျက်ခုံးပေါ်တင်ထားပေးပါ။ နွားနို့ခြောက်သွားရင် မျက်နှာသစ်လို့ ရပါပြီ။
သံပရိုသီးမှာ ဗီတာမင်တွေ အများကြီး ပါဝင်တာကြောင့် မျက်ခုံးအရှည်မြန်စေပါတယ်။သံပရိုသီးတွေကို အကွင်းလေးတွေဖြစ်အောင် လှီးပြီး မျက်ခုံးပေါ်မှာ မိနစ် 20 ကြာအောင် တင်ထားပေးပါ။ အုန်းဆီထဲကို သံပရိုသီးအကွင်းလေးတွေ တည့်ပြီး ကပ်ပေးရင်လည်း ရပါတယ်။ အိပ်ရာ မဝင်ခင် နေ့တိုင်းပြုလုပ်ပေးသွားရင် 15 ရက် ကြာတဲ့ အခါ သဘာဝဆန်ဆန် မျက်ခုံးကို ရမှာပါ။
လက်ဖက်ဆီနဲ့ လာဗင်ဒါဆီက အသားအရေအတွက် သာမက မျက်ခုံးအတွက်လည်း အသုံးဝင် ပါတယ်။ လက်ဖက်ဆီ သို့မဟုတ် လာဗင်ဒါဆီကို အုန်းဆီ၊ သံလွင်ဆီ၊ ကြက်ဆူဆီတို့နဲ့ ရောလိမ်းလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်မတည့်သူတွေ အတွက် တခြားအရေပြားပေါ် စမ်းသပ်ပြီးမှ မျက်ခုံးပေါ် လိမ်းသင့်ပါတယ်။
ကြက်ဥအနှစ်မှာ ဗီတာမင်နဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်တွေ အများအပြား ပါဝင်တာကြောင့် မျက်ခုံးကို ရှည်ပြီး ထူစေမှာပါ။ ကြက်ဥအနှစ်ကို မျက်ခုံးပေါ်လိမ်းပေးပြီး မိနစ် 20 ကြာ ထားပေးရုံ ပါပဲ။
Vaseline ကို မျက်ခုံး ရေဓာတ်ပြည့်ဖို့၊ မျက်ခုံးနူးညံ့ဖို့ အတွက် သုံးကြပါတယ်။ Vaseline ကို မျက်ခုံးပေါ် လိမ်းပေးရ မှာပါ။ Vaseline ကို ကြက်ဆူဆီ၊ သံလွင်ဆီ၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ်၊ ရနံ့ဆီ၊ နွားနို့တို့နဲ့ ရောပြီး လိမ်းလို့လည်း ရပါတယ်။
9. မျက်ခုံးကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်း
Mascara brush ကို သုံးပြီးတော့ မျက်ခုံးကို နှိပ်နယ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ မျက်ခုံးရဲ့ အလယ်ကနေ စပြီးတော့ စက်ဝိုင်းပုံစံ နှိပ်နယ်ပေးရင် သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေရုံသာ မက ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မျက်လုံးညောင်းခြင်း တို့ကို သက်သာစေမှာပါ။
10. အာဟာရ ဖြစ်စေသော အစားအစာများကို စားခြင်း
မျက်ခုံးလှလှလေး ရဖို့ဆိုရင် နေ့စဉ် အစားအစာထဲမှာ မြေပဲ၊ အသား၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ၊ ဆော်လမွန်ငါး၊ အသီးအနှံ၊ အသီးအရွက်၊ ကြက်သွန်နီတို့ကို စားပေးသင့် ပါတယ်။